२६ मुखी रुद्राक्षको जिल्ला निकासी कर ३५ हजार, एक मुखीको कति ? - Merodesh.news
२६ मुखी रुद्राक्षको जिल्ला निकासी कर ३५ हजार, एक मुखीको कति ?
२६ भदौ २०७५
विराटनगर, २६ भदौ । प्रदेश १ का पहाडी जिल्लाहरु अलैचीसँगै रुद्राक्ष उत्पादनमा अगाडी छन् । पूर्वी पहाडी जिल्लाको रुद्राक्ष किन्न भारतीय तथा चिनिया ब्यापारीहरु कृषकको घर घर सम्म नै पुग्छन् ।
कृषकको घर पुगेर ठेकेदारले खरिद गरेको रुद्राक्षको दानाको कर कति तिर्नु पर्छ ? पाँचसय, हजार भन्ने सोच्दै हुनुहुन्छ भने तपाइएको सोच गलत छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक बर्षदेखि जिल्ला निकासी कर एउटा रुद्राक्षको ३५ हजार रुपैया तोकेको छ । प्रदेश सरकारले लागु गरेको आर्थिक ऐनमा रुद्राक्ष जिल्ला निकाशी गर्दा २६ र २७ मुखी रुद्राक्ष प्रतिगोटाको ३५ हजार रुपैया कर तोकेको हो ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७५–७६ देखि २६ र २७ मुखी रुद्राक्षको मुल्य ३५ हजार तोक्दा एक मुखी रुदाक्षको कर भने तोकेको छैन् । त्यस्तै २२, २३, २४ र २५ मुखी रुद्राक्ष प्रतिगोटा १९ हजार, २१ मुखी रुद्राक्ष जिल्ला निकासी गर्दा २५ हजार रुपैया कर तोकेको छ । सरकारले १८ मुखीलाई १ हजार ९ सय, १९ मुखीलाई ५ हजार ५ सय रुपैया र २० मुखेलाई ९ हजार पाचसय रुपैया निकाशी शुल्क तोकेको छ । २, ३, ४, ७, ८, ९, १०, ११, १२, १३, १४, १५, १६, १७, १८ मुखी रुदाक्षको जिल्ला निकाशी शुल्क २ रुपैया देखि १९ सय रुपैया सम्म निर्धारण गरिएको छ ।
एक मुखे रुद्राक्षको भने जिल्ला निकाशी कर निसुल्क गरिएको छ ।